Zuo ike n'udo, Enyi m Mike | Martech Zone
Mgbe mbụ m si Virginia Beach kwaga Denver, ọ bụ naanị m na ụmụ m abụọ. Ọ bụ mara mma na-emenye ụjọ… ọrụ ọhụrụ, obodo ọhụrụ, alụmdi na nwunye m biri, na m ego echekwaghị. Iji nweta ego, m na-eji ụgbọ okporo ígwè na-aga ọrụ kwa ụbọchị. Mgbe izu ole na ole gasịrị, enwetara m obere mkparịta ụka na otu nwoke nọ n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè aha ya bụ Mike.
Nke a bụ foto m hụrụ na saịtị Mike nwa.
Mike bụ nwoke dị elu. Abụ m ezigbo mmadụ buru ibu, yabụ enwere ike ọ bụ ya mere anyị ji fuo ya. Mgbe m matara Mike, achọpụtara m na ọ na-arụ ọrụ dị ka Marshall nke na-echebe ndị ikpe gọọmentị etiti obodo. Na 9/11, Mike nwere nnukwu ọrụ ọ hụrụ ọrụ ahụ n'anya. Mmụọ nchebe ya akwụsịghị na usoro ikpe ụlọ ikpe, kwa. M na-ahụkarị ebe Mike na-achọta oche n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị n’agbata onye mmanya na-egbu na ndị ọzọ nọ na ya. N'etiti mkparịta ụka anyị, ahụrụ m na m kwụsịrị ilebara ya anya ka ọ na-ele ndị mmadụ anya. Ha amadịghị na ọ nọ n’ebe ahụ na-echebe ha.
Oge a bụ oge ndụ m ebe m nwere ọtụtụ ajụjụ na enweghị ọtụtụ azịza. Amalitere m ịga Nzukọ-nsọ ​​ma otu ụbọchị nke mbụ m lere anya gafee Nzukọ-nsọ ​​ma lee Mike na Kathy. Ekwetaghị m na ọ bụ ihe ndabara.
Mike were m n'okpuru nku ya wee meghee ụlọ ya nye mụ na ụmụ m. Anyị nọrọ ezumike ole na ole na Mike, Kathy na ụmụ ha (toro eto). Mkparịta ụka anyị n'ụgbọ okporo ígwè dị egwu ma ụfọdụ n'ime ncheta obi ụtọ m nwere banyere Denver. Mike hụrụ ezinụlọ ya n'anya karịa ihe ọ bụla n'ụwa. O nweghi mgbe ị na-ahụ nwoke toro ogologo ka ọ na-akwa ákwá, mana ihe ị ga - eme bụ ịmalite ikwu gbasara ezinụlọ ya.
E wezụga ezinụlọ ya, Mike nwekwara mmekọrịta chiri anya na Jizọs Kraịst. Ọ bụghị ihe ọ yi na uwe aka ya, mana ọ dịkwa anya na mkparịta ụka. Mike bụ otu n'ime Ndị Kraịst ahụ nwere ekele n'ezie maka ihe nile e nyere ya. Ahụrụ m ọ joyụ na ntụkwasị obi na Mike na ịchọtaghị n'ọtụtụ okenye, ọkachasị n'ihi okwukwe ya na ezinụlọ ya. Mike ekwusaghi ozi oma, o gbaliri ibi ndu ya dika o chere na Chineke choro ya. Mike ka kesara gị obi ụtọ ya na ahụmịhe ya n'ịhụnanya ọ nwere maka Chineke. Ọ dịghị mgbe ọ na-akwagharị, ọ dịghị mgbe ọ na-ekpe ikpe.
Enwetara m akwụkwọ ozi sitere n'aka Kathy, nwunye Mike, n'abalị a nke kwuru na ọ gafere n'ụra ya. Enwere m ụjọ. O wutere m na enweghị m ike ịlaghachi leta Mike ma nwute karịa na anaghị m akpọ ekwentị. Kathy na ndị ezinụlọ ya kwesịrị ịma na ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ m. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na Chineke tinyere Mike n'otu ụgbọ oloko dị ka O mere iji nyere m aka ịchọta ụzọ m.
Ana m ekele ruo mgbe ebighị ebi maka Mike, ịhụnanya ezinụlọ ya, na ihe ncheta dị egwu ha nyere mụ na ezinụlọ m. Chineke gọzie gị, Mike. Laa na ndokwa. Anyị maara na ị nọ n'ụlọ.
Tags: itinye ego
WordPress Na-abanye na Powerhouse CMS
Jul 16, 2008 na 1: 46 AM
Doug, kedu ihe gbara akaebe nye enyi Mike. Dị ka nwoke dị ịtụnanya nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ onye ọ bụla ọ bịara ileta. Daalụ maka ịkekọrịta akụkọ nke gị yana maka ịkekọrịta maka ọgbụgba ama dị nwayọ nke Mike. Ọ dị m nwute ọnwụ enyi gị.
Jul 16, 2008 na 11: 07 AM
Daalụ Becky. Oge ụfọdụ anyị anaghị ewere ndị na-echebe anyị, ọbụnakwa ndị enyi anyị.
Jul 16, 2008 na 11: 57 AM
Enyi ọzọ nke Mike kpọtụrụ m ma hapụ m ka ọ zipu ya. Amaghị m Steve, mana n'ịgụ akwụkwọ anyị abụọ - ị ga - ahụ otu nwoke pụrụiche Mike bụ.
Jul 16, 2008 na 2:21 PM
Daalụ maka oke okwu gị na njikọ nke ọzọ.
Ha abụọ baara ezinụlọ anyị uru nke ukwuu.
Jul 16, 2008 na 2:38 PM
Ọtụtụ ekpere na-aga na ezinụlọ gị. Anọ m 'gbaziri' nnukwu foto Mike nke ị nwere na saịtị gị. Ọ bụ nnukwu ihe osise na otu m si echeta Mike.
Jul 16, 2008 na 2:53 PM
Na-emetụ aka n'akụkụ Mike, gbaghara ya na ezigbo enyi gị. Obi ụtọ ị na-akọrọ a, ya ndị dị otú ahụ a mara mma akụkọ na m na-eche ihe dị mkpa na-echetara nke otú mgbe ụfọdụ ndị kasị ịtụnanya ihe na-eme n'ụzọ ijuanya.
Jul 21, 2008 na 12:26 PM
Ana m ekele gị nke ukwuu maka post gị gbasara nna m, enwere m obi anụrị ịnụ n'ọnụ ọtụtụ poeple nke kwanyeere nna m ugwu nke ukwuu, anyị niile ga-atụ uche ya nke ukwuu, mana na-echeta mgbe niile na ọ nọ ebe ka mma ugbu a ma na-elekwa anya karịrị mmadụ niile, na-enwe obi ụtọ dịka ọ ga-eche ịhụ ezinụlọ ya na ndị enyi ya ọzọ. mee anyi niile na ekpere gi especially mama.
ọzọ ana m ekele gị nke ukwuu !!!
Jul 21, 2008 na 6:42 PM
Bet nzọ, Kevin! Ọ bụ otu nwoke na mama gị na-agwa m na ị bụbu ezigbo nna, kwa! Apụl adịghị ada n’ebe dị anya site n’osisi ahụ.